UMsindisi wefektri yempahla: Zenzekelayo isantya seplothi eseta
I-TS-199 series setter setter sisantya esiphezulu somatshini wokuthunga ngokuzenzekelayo wokuthunga ingubo epokothweni. Oomatshini bokusetha epokothweni banokuchaneka okuphezulu kunye nomgangatho ozinzileyo. Xa kuthelekiswa nemveliso yemveli yesandla, ukusebenza kakuhle komsebenzi kwandiswe ngamaxesha angama-4-5. Umatshini omnye wokusetha ipokotho ...
Ngaba usakhathazekile ngokungamfumani umsebenzi onobuchule? Ngaba usakhathazekile ngokunyuka kweendleko zabasebenzi? Ngaba ungxamile ukuba igqitywe iodolo? Ngaba usakhathazwa bubunzima kunye nokucotha kokuthunga uziphu epokothweni? Inkampani yethu kutshanje liphuhlise oluzenzekelayo ngokupheleleyo ...
Inkampani yakhe isakhiwo esitsha sefektri kwaye yongeza i-20 enyibilikayo imigca yemveliso, kunye nemveliso yemihla ngemihla yeetoni ezili-15. Ngoku sineqela lezobuchwephesha elomeleleyo, liyahlangabezana neemfuno zamazwe ahlukeneyo ngeendlela ezahlukeneyo zokusebenzisa imaski ngokweemfuno ezahlukeneyo zabathengi abahlukeneyo ...
Inkampani yethu isebenzisana no Changying non-ephothiweyo ilaphu Co., Ltd ukwandisa imigca yemveliso. Ngoku imveliso yemihla ngemihla yengubo engalukanga iitoni ezili-10, kwaye imveliso yelaphu elinyibilikisiweyo elithambileyo ziitoni ezi-3. Ngokungqongqo zihlolwe zonke izinto ekrwada, Umgangatho ojolise kwizinto ezisisiseko kwi-masterbatch.
Kude kube sekupheleni kuka-2019, sinomgca opheleleyo womatshini wokusetha ipokotho, umatshini wokuthunga ipateni, Umatshini wohlobo lokuthunga umatshini, umatshini wokuthunga uhlobo lweJuki, umtya weqhosha, kunye nomatshini wokuncamathisela iperile, kunye nezinye iintlobo zoomatshini bokuthunga ngokuzenzekelayo. 1. Umatshini wokusetha epokothweni:
Phakathi ku-Novemba, siye kuMmeli waseMelika kuQeqesho oluzenzekelayo lwePocket
Uqeqesho kubandakanya: 1. indlela yokwenza inkqubo. 2. Ungayiguqula njani inkqubo. 3.Ukutshintsha indlela yokubamba izinto kunye nokulungisa umatshini kwijean ipokotho, emva koko sibafundise indlela yokutshintsha i-clamp kunye nokulungisa umatshini kwi-shirt ye-shirt. Indlela yokusombulula ingxaki xa ...
Phambi kokuba basebenzise umatshini omnye wesinyithi epokothweni, emva koko umatshini osetwa ngokuzenzekelayo. Ngoku sebenzisa oomatshini bethu bokuzenzela abaseta ipokotho ngokuzenzekelayo, banokugcina umntu osebenza kunye nexesha. Igcisa loMthengi lifunda nzima kakhulu. Xa befunda, benza irekhodi. Iingcali zikrelekrele kakhulu. Emva kwesev ...
Inombolo ye-1 Yewang, idolophu yaseYoxie, isithili saseSongjiang, iShanghai, China